Oday Dhaqane: 60 Jir ayaan Jaceylka dhabta ku Dareemay - iftineducation.com
Oday Dhaqane: 60 Jir ayaan Jaceylka dhabta ku Dareemay
aadan21 / November 25, 2012
iftineducation.com – Dhaqane Cabdi oo ah Aabo jiro 74 Sano ayaa Shabakada Iftineducation.com uga warbixiyey Taariikhda Noloshiisa iyo Dareenka Jaceylka isagoo run ahaantii ka faalooday Nolosha dhabta ah ee Lamaanaha Soomaalida Maanta.
Aabahan oo ku nool Wadanka Tanzania ee Qaarada Afrika ayaa mar uu hadal hayay Dhaqanka Lamaanaha Soomaalida iyo sida loo dareemo jaceylka dhabta ah ayuu xusay inuu Jaceyl midkiisa dhabta ah uu Dareemay isagoo jira konton iyo xoogaa jir.
Dhaqane oo ahaa waqtigii Nabada nin askari ah kana howl galayay gudaha Magaalada Bosasso ayaa sheegay inuusan guursan tan iyo waqtigaas sidaasi darteed uusan helin Jaceyl dhab ah.
Sanadkii 1994tii waxaa soo martay Bile Cabdi dhacdo Jaceyl taasuu inooga sheekeyey Wuxuuna yiri :- Marwalbo waxaan arki jiray lamaano is dhahaya Wan is jecelnahay waxaan goob joog u ahaa dad is calmada, is caashaqa oo is doonta , Balse waxaan aaminay inaan leheen Qalbi naxa.
Sanadkii 1994 ti ayaan Magaalada Dar us salam ee Tanzania oon waqtigaasi ku Noolaa ku bartay gabadh aad u qurux badneed runtii labadeenu waan iska helnay waxaan Dareemay Jaceyl Kalgaceyl wata oo waxaan ka xishooday inaan gabadh Da’a ahaan aan labo jibaar dhali karo inaan dhaho waan ku jeclahay.
Mudo kadib gabadhii waxaan ku sasabay Hanti yar oon lahaa , anigoo Ugu danbeyn u bandhigay Guur balse nasiib wanaag kuma aanan gacan seeyrin oo Calafka ayaaba iskeen baray , Waan is guursanay Qoys baraare ku nool ayaan nahay oo ilaaya hada waay i baxnaanineysaa…
Nolosheeyda Jaceyl hadii uuba jiro midkaas ayaa isoo maray , Jaceylkuse kuma xirna Da’a & Midab midnaba , Jaceylka maantana waa mid sahal ku imaada inkastooy dhalinyaradu sahal ku burburshaan , waxaan leeyahay Dhalinyarooy waa muhiim inaad Dookh ku guursataan.
Nin Soomaali ah oo Gacanka ka jaray Haweeney South African ah.